Shiinaha Carbide Rotary Burr SE Qaab -soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
carbide rotary burrs burushka qaabka SE waxaa loo adeegsan karaa aaladaha gacanta ku shaqeeya ee korontada ku shaqeeya iyo kuwa hawo-mareenka leh si loo gooyo agabyada sida aluminium, alwaaxyada titanium, naxaasta, birta, birta, naxaasta, birta zinc, biraha dhalada, naxaasta, nikkel, iyo balaastikada kala duwan, iwm .Qalabkaan waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa aalado badan oo pneumatic ah, koronto.
100% sibidh carbide bikrad dammaanad ah
Materials Qalab kala duwan oo leh darajooyin carbide kala duwan.
Resistance Adkaysiga xirashada sare, cimri dhererkiisa
Processing Hawlgalinta sare iyo xawaaraha goynta.
Technology Tiknoolajiyadda alxanka lacagta oo tayo sare leh
5: Dhamee mashiinka dusha sare ee daloolka gudaha ee qaybaha mashiinnada;
J: Waxaan haynaa tilmaamo joogto ah, waxaana la dhoofin karaa saddex maalmood gudahood kadib marka la xaqiijiyo heshiiska. Alaabooyinka la habeeyay, 25 maalmood.
J: waxaan leenahay adeegyo dabagal tayo leh oo la hubo oo loogu talagalay badeecadaha la iibiyay. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto. Waxaad ka heli doontaa adeeg-iibinta kadib qancin 24 saac gudahood.
Hore: Carbide Rotary Burr Qaab SD -Bal Qaabka
Xiga: Carbide Rotary Burr SF Shape -Shirka Geedka leh Radius End
Carbide Rotary Burr SG Qaabka -Qaabka Geedka leh P ...